Xiaomi malitere Xiaomi Mi A2 na gam akporo One, obu ezie na n’enweghi audiojack | Gam akporosis
Xiaomi Mi A2 bụzi onye gọọmentị: nnukwu etiti, ọ bụ ezie na -enweghị ọdịyo maka ekweisi
Xiaomi nwere were obodo Madrid iji chee Xiaomi Mi A2 a na-atụ anya ya,, nnukwu etiti etiti na-enweghị ọdịyo ọdịyo maka ekweisi. Ọ ga-esiri Xiaomi ike iwepụ Mi A1 gara aga, otu n'ime ekwentị kachasị mma nke arụpụtara n'afọ ndị na-adịbeghị anya maka uru ego bara.
Ejiri Xiaomi Mi A2 mara n'ihi na enweghi n'uche software MIUI n'onwe ya site na ụlọ ọrụ China, iji kwado Android One, nsụgharị zuru oke nke OS kachasị arụ ọrụ na mbara ala. Anyị ga-amata nkọwa nke otu n’ime ekwentị ndị kacha ewu ewu n’afọ.
1 Xiaomi Mi A2, ekwentị dị ọnụ ala yana nnukwu ngwaike
2 Ekwentị China na chicha
3 Ekwentị Xiaomi na gam akporo Otu
Xiaomi Mi A2, ekwentị dị ọnụ ala yana nnukwu ngwaike
Ihe e ji mara Xiaomi Mi A1 na-eme ka njedebe nke ihe ọ bụla abụwo okwu nleba anya nke ụlọ ọrụ China: chọta uru kachasị mma maka ego na ekwentị mkpanaaka. Ọ bụ n'ihi nke a ka Xiaomi Mi A2 emeela ka mmadụ nwee atụmanya dị otú ahụ, ọ bụ ezie na ọ ga-aga n'ihu na-enweghị audiojack iji wepụta njikọ USB-C maka ebumnuche ndị a.
Akụkụ ọzọ dị ịrịba ama nke ọhụrụ Xiaomi Mi A2 bụ nke ahụ ị na-echefu ahụ igodo ka ha mebere na ihuenyo. Agbanyeghị na ndị ahụ, atụmatụ ahụ ghọrọ "ihuenyo niile" dịka ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwere mobiles. Na Xiaomi Mi A2 anyị nwere okpokolo agba dị ala na nke dị elu na-egosipụta akara nke mbugharị nke ọhụụ ọhụrụ nke akara ndị China.
Ihuenyo bụ 5,99 sentimita asatọ na mkpebi Full HD IPS na usoro 18: 9. Nke a na-esote usoro nke usoro ahụ nke na-enye anyị ohere igwu ọdịnaya n'ime ogologo oge, ọ bụ ezie na a ka nwere ọtụtụ egwuregwu na ngwa na-eji ya eme ihe. Agbanyeghị, ọ bụ oge nke oge.
Ekwentị China na chicha
Xiaomi Mi A2 bụ etiti dị n'etiti na-akpọrọ anyị gaa mgbawa Qualcomm Snapdragon 660, 4 ma ọ bụ 6 GB nke Ram na nchekwa nke enwere ike ịhọrọ n'etiti 32, 64 ma ọ bụ 128GB. N'ebe a, ọ na-agbakọ n'ụzọ zuru oke na ngwaike nke a ga-ahụ na PUBG Mobile egwuregwu iji lelee ezigbo arụmọrụ ya; ebe a ụfọdụ n'ime aghụghọ nke ọmarịcha agha a royale.
Akụkụ ọzọ a ma ama nke Xiaomi Mi A2 bụ foto ya na a 12 na 20 megapixel n'azụ igwefoto abụọ. Ebumnuche nke igwefoto nke abụọ ahụ bụ na anyị na-eji ya dị ka lens telephoto ma nwezie foto nke mmetụta nhụjuanya bụ ihe dị ịtụnanya. Na ihu anyị na-aga 20 megapixels nke mere na ndị selfies bụ ihe ọzọ na-azọrọ nke a mobile na-aga nwere ezigbo ìgwè nke Fans.
Emechaa anyị nwere ikike batrị nke Xiaomi Mi A2 nke ahụ esịmde ihe ruru 3.010 mAh na ngwa ngwa ngwa ngwa nke QuickCharge 3.0 nyere, yabụ anyị nwere ike ikwu na ọ ga-aga nke ọma na batrị, na-enwe Snapdragon 660 nke na-arụ ọrụ ike dị ukwuu.
Nlereanya My A2
System Na-arụ ọrụ Android 8.1 Oreo - gam akporo otu
Ihuenyo 5.99 sentimita asatọ - Full HD IPS
Njupụta de pixels site anụ ọhịa 403 ppi
Nhazi Qualcomm Snapdragon 660 12nm 8-isi 2.2GHz Adreno 512 GPU
RAM 4GB ma ọ bụ 6GB
Nchekwa esịtidem 32/64/128 GB gbasaa site na oghere kaadi microSD
Igwefoto isi Dual 12 MP IMX486 + 12 MP IMX376
Igwefoto Ihu ihu 20MP IMX376
Batrị 3.010 mAh na-abụghị ewepu ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa 3.0
Akụkụ X x 158 75.4 7.3 mm
Ejiri agba Nwa - Gold - Pink
Ihe ndị ọzọ Mkpisiaka mmetụta - USB-C njikọ - Infrared ihe mmetụta - Dual SIM -Bluetooth 5.0
Ahịa 249 - 279 - 349 euro
Ekwentị Xiaomi na gam akporo Otu
Otu akụrụngwa kachasị ukwuu nke Xiaomi maka ndị ọdịda anyanwụ na-enweta akwa oyi akwa MIUI. Nke a adịtụwo arọ ma ị ga-emeso ya. Site na Xiaomi Mi A2 anyị nwere ike ichefu banyere ya iji gaa na a dị ọcha mbipute free niile ahịhịa ma si otú na-enwe gam akporo Oreo 8.1. Ọ bụ ya mere Xiaomi Mi A1 gara aga ji nwee ihe ịga nke ọma na akụkụ ndị a.
Ihe ndi ozo banyere Xiaomi Mi A2 bu nke ya Dual SIM, ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, infrared, 4G VoLTE, Bluetooth 5 LE na ibu ya: gram 168. Ia nwere Xiaomi Mi A2 dị na agba atọ, dị ka acha anụnụ anụnụ, oji na ọla edo, yana na ọnụahịa ndị a na ụdị nke ọ bụla:
Xiaomi Mi A2 4GB + 32GB: Euro 249.
Xiaomi Mi A2 4GB + 64GB: Euro 279.
Xiaomi Mi A2 6GB + 128GB: Euro 349.
El Xiaomi Mi A2 bụzi onye ọrụ yabụ na ị nwere nhọrọ nke inweta ya site na ụlọ ahịa ọ bụla dị na mpaghara Spanish ma yabụ ị nwere ike iji nnukwu ekwentị gaa ezumike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi A2 bụzi onye gọọmentị: nnukwu etiti, ọ bụ ezie na -enweghị ọdịyo maka ekweisi
Xiaomi na-ebupụta Xiaomi Mi A2 Lite, maka ndị chọrọ ntakịrị ọkwa na ndụ ha na gam akporo One
Nke a bụ otú Galaxy Note 9 ga-esi na aja aja, acha anụnụ anụnụ na oji